Phone မှာ Themes လှလှလေးတွေအသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေအတွက်: GLASS APEX /NOVA /GO /SMART THEME v7.4 Apk | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on December 1, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Android themes လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.. ဒီ themes လေးတွေကတော့ Apex Launcher နဲ့ Go Launcher ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ Themes လေးတွေပါ။ Themes ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ android phone တွေပေါ်မှာ style လှလှပပလေးတွေကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို အဆင်ပြေစေတဲ့application လေးတစ်ခုပါပဲ။ Icon ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလဲ လှပတဲ့အတွက် အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ စွဲလန်းမှုတစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော် Themes ကို Launcher ပေါ် ထည့်သွင်းနည်းကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Apex Launcher ထဲသို့ Themes ထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်း===============================
Apex Launcher ကိုအရင်ဆုံးဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် theme ကို install ထပ်လုပ်ပါ။ Apex Launcher ရဲ့ settings ကိုဖွင့်ပြီး Themes setting ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ Theme setting ထဲမှာ Glass Theme ကိုရွေးးချယ်ပေးလိုက်ရင် ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ android phone ရဲ့ theme style ကဒီဇိုင်းပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Go Launcher ထဲသို့ Themes ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်း=================================
Go Launcher ကိုဖွင့်ပြီး MENU key ကိုနှိပ်ကာ Theme Preferences ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Glass Themeကိုရွေးပေးလိုက်ရင် Go Launcher မှာ Glass Theme ကို အသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ application လေးကိုတော့ android version 2.0 နဲ့အထက်မှာ ရှိရုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အောက်က link တွေကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Download (zippyshare)
အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ မပြေသည်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြု၍ Comment ပေးခဲ့ပါ။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Comment တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် post တွေရေးဖို့ အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ Aung Ko Htet (www.itstudier.com) ဒေါင်းနည်းများမသိပါက ဒီမှာ သွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ
This entry was posted in Android Theme. Bookmark the permalink.
← Popular Post စတိုင်းအလန်း ( ၃ )	How To Root Huawei U8861,U8818,U8812 !!! (8Mb) →